को विश्वविद्यालय रोसटक को छैन केवल बाल्टिक सागर क्षेत्र मा सबै भन्दा पुराना विश्वविद्यालय छ; यो पनि परम्परा मा अमीर छ. र पाठ्यक्रम, युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक. रूपमा स्थापित भएको थियो 1419, यसलाई चाँडै यसको 600th वार्षिकोत्सव मनाउन हुनेछ. यो शिक्षित को लामो परम्परा हेर्न फिर्ता विद्यार्थी र अनुसन्धान गरिरहेको. को गोथिक-शैली मिलाइएको भवन, रूख-लाइन पक्षको संग मिलेर र पार्क एक आश्चर्यजनक सेटिङ लागि बनाउन. विश्वविद्यालय को केन्द्र मा यो थप्दा हामीलाई सुरुमा आकर्षित जो आँखा तेतैतिर मुख्य भवन छ को सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु. यो छ बिरूद्ध स्थित पार्क र झरना, को प्रशंसा केही समय खर्च गर्न विद्यार्थी र आगंतुकों लागि उत्तम ठाउँ निर्माण को धनी बाहिरी.
रोसटक को विश्वविद्यालय विषयहरू को एक धेरै व्यापक दायराभित्र जर्मन विश्वविद्यालयहरु मध्ये एक छ. यो भन्दा बढी प्रदान गर्दछ 100 पाठ्यक्रम: 34 समाप्त गर्नुहोस् एक स्नातक संग, 56 एक मालिक डिग्री संग, 37 (शिक्षकहरू सहित) एक राज्य परीक्षा संग, र3एक पीएच.डी संग. यसबाहेक, शिक्षक प्रशिक्षण केन्द्र र शैक्षिक अनुसन्धानले शैक्षिक अनुसन्धान मात्र गर्दैन तर शिक्षक प्रशिक्षणको गुणस्तर सुधार गर्ने कार्य गर्दछ.
को को एक प्राप्त गर्न कसरी जान्न चाहनुहुन्छ सबैभन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु युरोप मा? Whichever निर्देशन तपाईं यात्रा बाट (जस्तै. रोसटक वा स्केविरिन, बर्लिन वा हैम्बर्ग), रेल लिन नगरेसम्म Wismar रेलवे स्टेशन पुग्न. यहाँबाट, तिमी सक्छौ बस समातेर यस जे-आर-जन Becher-Strasse मा लाइनहरु प्रयोग गरेर बस-स्टप गर्न4वा जी (Ostseeblick तिर) वा बी-डी (Seebad Wendorf तिर). यो बस स्टपबाट मात्र एक मिनेट पैदल यात्रा गर्न सक्दछ गाडी बिसाउने को परिसर गर्न.
आरहूस विश्वविद्यालय डेनमार्क दोस्रो-सबै भन्दा ठूलो शहर मा स्थित छ (आरहस शहरको नाम पनि हो) र यसको हरियो परिसरले चित्रण गर्दछ, संग पूरा ताल. विश्वविद्यालय कसरी मानिसले बनाएको संरचना र एक सिद्ध उदाहरण हो प्राकृतिक वातावरण सिद्ध अनुरूप काम गर्न सक्छन्. मुख्य भवन द्वारा प्रदर्शन, पूर्ण. को भवन को धेरै डेनिस architect द्वारा बनाइएका थिए C.F. विश्वविद्यालय को युवा झल्काउँछ कि एक आधुनिक डिजाइनमा Moller. Moller र आफ्नो साझेदार Kay Fisker र Povl Stegmann थिए पहेलो-ईटा भवन लागि जिम्मेवार. तिनीहरूले विश्वविद्यालय गर्न विशिष्ट साथै अद्वितीय छन्. मुख्य भवन देखि को एक मानिन्छ गरिएको छ 12 डेनिस इतिहास सबैभन्दा महत्वपूर्ण वास्तु काम. धेरै कारण मध्ये एक यो सबैभन्दा मध्ये एक छ शानदार विश्वविद्यालयहरु.
अधिक संग 44,000 विद्यार्थी, आर्कस विश्वविद्यालय देशको दोस्रो ठूलो विश्वविद्यालय हो. यसमा कलामा चारवटा संकायहरू छन्, विज्ञान र प्रविधि, स्वास्थ्य, र व्यापार र सामाजिक विज्ञान.
विश्वव्यापी orientated, विश्वविद्यालय मार्फत ठाउँमा विनिमय कार्यक्रम छ 50 विश्वव्यापी संस्थाहरू. यो विश्वविद्यालय आर्कटिक को समावेश, को युट्रेच्ट नेटवर्क, नर्डिक केन्द्र फुदान, र नोर्डिक केन्द्र भारत.
आरहूस डेनमार्क सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रेलवे जंक्शन को एक मा निहित. त्यहाँ उत्तर गर्न प्रतिघण्टा प्रस्थान छन्, दक्षिण, र पश्चिम. दक्षिणी र मध्य युरोप बाट, को जडानहरू हैम्बर्ग / Flensburg मार्फत छन्. हैम्बर्ग देखि आरहूस यात्रा समय लगभग पाँच घन्टा. पूर्वी युरोपेली देशहरूमा आरहूस गर्न जडानहरू तालिम देखि पोल्याण्ड र कोपेनहेगन मार्फत जाने. आरहूस र कोपेनहेगन देखि प्रतिघण्टा सेवाहरू छ. खोल्ने सुरुङ महान् बेल्ट अन्तर्गत छोटो छ यात्रा एक घण्टा द्वारा. यात्रा अब साढे तीन घन्टा लाग्छ. त्यहाँ स्वीडेन धेरै दैनिक जडानहरू, जर्मनी, र युरोप को बाकी.
Do you want to embed हाम्रो ब्लग पोस्ट “युरोप मा सबै भन्दा शानदार विश्वविद्यालयहरु” आफ्नो साइट मा? तपाईँ या त हाम्रो फोटो र पाठ लिन सक्छ र बस यो ब्लग पोस्ट एउटा लिङ्क हामीलाई क्रेडिट दिन. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fspectacular-universities-europe%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
#bestuniversity #शिक्षा #विश्वविद्यालयहरु #विश्वविद्यालय europetravel